Njengoba lungenye yezinto bendabuko esetshenziselwa umhlobiso Ingaphakathi nengaphandle lazo izakhiwo zokuhlala, kungumuthi. Kukhona amasu amaningi ukucutshungulwa bokubeka kwezinkuni, kodwa imihlobiso ewumbukwane etholakala uma isicelo emseleni ngentambo. Ubuhle imikhiqizo enjalo umcabango, kuyilapho ubuchwepheshe ngokwalo lukhuni.
Izici openwork eqoshwe
Openwork, noma emseleni eqoshwe kwenziwa ukusika noma imishini ngokusebenzisa ngemuva by. Ngo eseqedile ifomu amaphethini kanye zililo ukukhanya kanye Airy. Openwork lekubazeni ngokusebenzisa icala futhi inothi. Ngokusebenzisa ngentambo slotted "isebenza" e yokudlulisela. Umfanekiso oqoshwe ezingenanzuzo - kulapho sibalo slotted unamathele isisekelo, isibonelo, ingemuva lokhuni ukukhonza.
Ukuze besika izindawo ezisetshenziswa amashizolo, bezihlahla ekhethekile, sokuzivivinya noma namasaha. Ithuluzi esebenza kahle kakhulu kuyinto Jigsaw kagesi. Trench ezibaziweyo Jigsaw ikuvumela ukuba kalula futhi ngokushesha ukukhiqiza kabusha tinongo ngisho ukucushwa eziyinkimbinkimbi kakhulu.
amakhosi Novice kufanele kuqala sinake theory okuyingxenye. Ngenhlanhla, namuhla kukhona okuningi ukuphrinta ewusizo futhi isiqophi sendlela ababulawa kahle emseleni ekuqopheni amatshe amathuluzi adingekayo, izici of ugodo esithile, mayelana ukulungiswa izikhala, ngokukhetha izithombe, nokunye. D.
Ngemva kokuhlola izici ubuchwepheshe, ungakwazi ukukhethwa amathuluzi. Ngaphandle-jigsaw wabona lomshini bese iqoqo namazinyo nosayizi, adingekayo abukhali imimese, amashizolo, ishizolo, sokuprakthiza namabhola ezahlukene ukujiya, lozhkorezy, Needle, nemishayo olwalwenza futhi Sanding.
Esinye isinyathelo emsebenzini wokulungiselela iyona Ukukhetha lwamaphethini, izingoma, noma izigcawu uhlobo, ukudala umsele ukuthi ukuqoba izosetshenziswa. Imidwebo kungenziwa ngokuzimela noma kumasayithi ezikhethekile ukuze uthole futhi uzitholele zangaphambi ukunciphisa noma bandise ubukhulu babo njengoba kudingeka.
Izici ezahlukene ukhuni
Umbuto kutsi izinga okusezingeni eliphezulu, ngokushesha futhi ngobunono ngentambo slotted uyabulawa, akuxhomekile nje kuphela esimweni ezingeni loMkhandlu ngamakhono, kodwa futhi ngokhuni. Ngamunye zilwane izakhiwo yaso ehlukile enhle, okuyinto ngempela okufanele sicabange ngazo lapho ekhetha indaba for workpiece.
Pine. Kulula kakhulu ukufinyelela kuwo futhi engabizi kwezinkuni, kodwa kancane efanelekayo eqoshwe, hhayi kuphela ngenxa gummosity. Iqiniso ukuthi siqukethe izingqimba kanzima futhi ezithambile. Ukuphuca kanye ukugaya imikhiqizo ephuma zikaphayini enze nzima ngenxa umehluko izakhiwo njengoba ummese lokukhuhla "thatha" ngokuhlukile. Plus, lolu hlobo izinkuni has a ukuthungwa oluhlukile isusa ukunaka kwakhe le mifanekiso eqoshiwe sibalo, ikakhulukazi uma kuyinto encane.
Aspen. Prorizna intambo le ugodo kuhilela nobunzima elihlobene ne-umsungulo yokulandelana kwayo ngokohlu. Naphezu kweqiniso lokuthi Imi Aspen, efana ibhotela, ukusika ithuluzi "yizinkulumo", futhi yena ngayinyomfoza ngayiphosa. Beginners-yezithakazelo ezigxilile zababazi abangenayo nakho lokhu okuqukethwe, ukuqala naye "umsebenzi" yakhe neze asizisoli njengoba ngempela futhi zikaphayini.
Birch futhi Linden. Lezi ehlathini akheke enhle monochromatic, nobulukhuni ezidingekayo futhi ductility ngesikhathi esifanayo evumela ukuba uqaphele imikhiqizo ngisho imiklamo eyinkimbinkimbi kunazo futhi eyinkimbinkimbi slotted ngentambo.
Khama. Solid, enhle kakhulu cross-section futhi ihambelana kahle zonke izinhlobo izinkuni ukucubungula. Kuyinto kuhle kakhulu ekudaleni umkhiqizo nge isibonelo esihle, isibonelo, ubucwebe zabesifazane.
Lapho ukuthenga ukhuni eqoshwe
Izindawo lapho ungathola impahla ukusebenza, kunezindlela eziningi, into esemqoka - ukuthola eliphezulu futhi izinkuni ezomile. Ngokwesibonelo, ezinhle workpiece ngentambo okuthengiswa okukhethekile ezitolo kubalandeli of ezenziwe ngesandla futhi zobuciko. Ngaphezu kwalokho, ungakwazi ukuthenga ibhodi efanelekayo ezitolo zokwakha noma Timber elisekela. A ibhizinisi elincane ukwenziwa ifenisha kanye wokubaza - liyinqolobane wangempela olomile trimmings ezinobukhulu obuhlukahlukene. Ukuze woodworkers lokhu kusaphaza okungaka ayibalulekile, ngakho Livamise khulula.
Enye - a iziqukathi sokhuni (amabhokisi, Pallets). Omunye umkhiqizo ezifana izovuleka izicucu eziyishumi nanhlanu kuya amabili.
ukhuni omiswe Imithetho
Kufanele kukhunjulwe ukuthi slotted nezinye izinhlobo ngentambo ukusebenzisa ukhuni kuphela kahle omisiwe, ukuze ngingasebenzisi ozowabuka ekuhambeni kwesikhathi uzisole, njengoba eseqedile umkhiqizo ezibaziweyo bome, asonte futhi inqamuke. workpieces iphele ayikwazi kwenziwe ilanga noma eduze kurediyetha. Lolu khuni kumele omisiwe nomaphi egumbini okufudumele komoya okuhle. Ibhodi kungcono ukubeka imikhawulo ngokubheja ngaphansi wayibhinca kubo ukuze uvikele ukufinyelela emoyeni zonke izinhlangothi. By the way, workpiece kungaba ezomile kancane ku-microwave for kwamaseshini ambalwa.
Prorizna ekuqopheni amatshe ama-stencil, okumele ayilungiselele kusengaphambili, iqala nge iphethini elihunyushwe ukuba kube izinkuni. Ingemuva izingxenye zazo ukuphuma, ahlukaniswe ukuchamisela. Eduze imigqa drawing yamba imbobo ye ububanzi oluthile, olufana ngokuthi ungazenza ikhaba sawing.
Okulandelayo is ukugcwalisa ngokumelene wabuka iphethini. Nciphisa webs nozhovok ababulawa emseleni eqoshwe stencil, eyayibonakala wacosha nge eziyinkimbinkimbi, isb. E. Nge ezincane kanye Curves emaweni. Sawing izingxenye ezinkulu nge uqonde noma bushelelezi nentaba imigqa Kwenziwa ngokusebenzisa webs ebanzi.
Kufanele kuqashelwe ukuthi ngokusebenzisa ikhaba ezinkulu, ungathola uhlaka Ragged kungani kungcono uncamela namazinyo esihle wabona blade. Drilling feather kunconywa ukwenza sokuzivivinya, futhi lokhu kufanele kwenziwe kuzo zombili izinhlangothi kwezinkuni, pre-Drilling umgodi ngokusebenzisa sokuprakthiza mncane.
Indlela enhle kakhulu ukugwema imiphetho ezimanikiniki burrs izigodo sezifakiwe zokunamathela kwingemuva workpiece iphepha obukhulu.
Kumele kukhunjulwe ukuthi isici esiyinhloko esenza sibe unciphise ubumsulwa, kuyinto nokucija ithuluzi, ngakho kufanele anakekele lesi sici.
yezithakazelo ezigxilile zababazi Novice ekukhetheni nomhlobiso kufanele aqondiswe isithombe esilula kanye izingxenye ezinkulu kanye nelinanincane lema-emakhoneni "kanzima". Ngenxa umdwebo kahle obujwayelekile ungehlisa inani lomsebenzi, ekugcineni ukuthola umkhiqizo omuhle.
Ngemva kokukhipha isizinda TNC rework imikhiqizo ukuthola imiphetho bushelelezi futhi zihlanzekile yesithombe. Ukuze yokuhlanza usebenzise emaweni futhi ezitshekile ishizolo naphakathi kanye nosayizi esincane. Nzima amashizolo nomhlobiso isikhala ukusikiwa ngommese obukhali. Ngala mathuluzi, imiphetho isithombe babanjwa, wotho ukusika mncane noma ngokukhetha umucu emincane.
Chisel Kunconywa ukuba ukuthambekela kancane ngenhlonipho kuya ebusweni, ukuthuthela khona phansi kancane eceleni. Le nqubo kusiza inqubo ukulungisa iphutha futhi ivumela wezindlu ahlabayo.
Icubungula slotted imikhiqizo openwork usebenze nhlangothi zombili. Ngemuva ukusika amashizolo wabuka ilungiswe cut senziwa usebenzisa Needle iphethini, Emery ukugaya imigoqo kanye befuna isikhumba.
Modeling nomhlobiso ezenziwe ngokuhambisana ngentambo esebenzayo - noma indiza-impumuzo.
Technique indiza-slotted ngentambo ngokuvamile lisetshenziswa womshini umhlobiso ifenisha, cornices, iwindi casings, amafasitela, nokunye. D. eqoshwe impumuzo openwork ihlinzeka umkhiqizo nenhle ngaphezulu, ngakho-ke isetshenziswa ukudala zabesifazane ubucwebe, izikrini, fillers ngoba iminyango ikhabethe futhi t. e. By endleleni, obucayi ifenisha iminyango ukubheka kuhlaba umxhwele ngisho nakakhulu uma ezingemuva wokudonsa indwangu ezikhanya isizinda ukwakheka Ornamental okuzokwenza bheka crisper futhi licace.
Silicone sealant ngoba amalunga omzimba Ingaphandle: izici lobuchwepheshe kanye isicelo